ကျွန်တော့် ဘ၀ဇာတ်ခုံ: ကျနော့်ဆွေမျိုးများ
ဟဲ့မောင်မျိုး... “ဟမ်” ၊ ဟမ် မလုပ်နဲ့.. သရဲဆွဲမယ် ..“ အူးအူး ” လို့ပဲ ထူး။
ကုလားလိုရှင်ပြုတယ်တော့ မသုံးပါနဲ့ကွာ။ ဗမာတွေက ရှင်ပြုတယ်ဆိုတာ သာ့သနာ့ဘောင်ဝင် မြင့်မြတ်တဲ့ ရှင်ရဟန်းဘ၀ကို ရယူကြတာပါ. အတိဒုလ္လဘ သာသနာကွဲ့။ငါတို့ဆို ကိုရင်ဝတ်ဖို့အရေး အဖေချွေးနဲစာလေးစုတာ ကြာလွန်းလို့ ငါ့ဟမ်းချိန်းလေးတောင် ရောင်းပြီးရှင်ပြုရတာဟဲ့။
ဟိုဒင်းကို ခလေးမွေးကောင်းအောင် ဖြတ်တာကို ရှင်ပြုတယ်လို့တော့မသုံးစေချင်ဘူး. (ရေးရတာလဲ ခပ်လန့်လန်ရယ်)
ခါတနာ လုပ်တယ်.. စူနိုက်လုပ်တယ်ဆိုလာပဲ ။ အဲလို သုံးပါကွာ.။ ရှင်ပြုတယ်တော့ မသုံးစေချင်ဘူး ၊ မိုးခါးရေ မသောက်နဲ့ တစ်ယောက်ကစပြီး ပြုပြင်ရမှာပေါ့။
ငါလဲတွေ့တိုင်းနင့်ပဲ ဆရာလုပ်ရတာဟေ့ (ရေးရတာလဲ ခပ်လန့်လန်ရယ်)
ဒါဆို မောင်မျိုးက အူတတ်တာပေါ့ ဟဟ
ကျွဲငချစ်မြေး ကျွဲမောင်မျိုးပေါ့ :P
ဟာ....ကြောင်မျိုး ကနေ ကျွဲမျိုး ဖြစ်သွားပြီ.......
မိုးယံ ပြောတာ အမှန်ပဲ ညီရေ. .
ခါတနာ လို့ ပြောင်းသုံးသင့်တယ်။
ဆက်ပါဦး ကျွဲငမျိုးရေ . . .
မိုးယံ နဲ့ကိုဇော်ရေ တစ်ချို့သော အကြောင်းရာတွေက ကာယကံရှင်က အများကြီးတွေးလိုက်မိတာမဟုတ်ပေမယ့် ရှု့ထောင့်တော်တော်များများက ဝေဖန်ခံရတဲ့အခါ အဲ့လူဟာ နောက်ဆိုရင် စကားတစ်ခွန်း စာတစ်ကြောင်းရေးဖို့ကို တော်တော် တွန့်သွားတတ်ပါတယ် ဒါက ကျနော် စာရေးခဲ့ဖူးတဲ့ အခိုက်တန့်အတွင်း ရခဲ့တဲ့ အတွေ့ကြုံမျိုးပေါ့ ကုလားတွေ ဟိုဟာလုပ်တာ ဒီဟာလုပ်တာကို ရှင်ပြုတယ်လို့ သုံးတယ်လား ဘာလားဆိုတဲ့ သမိုင်းကြောင်း ရာဇ၀င်ကိုကျနော်ါအတိကျမသိပါဘူး ဒါပေမယ့် ဒီစာမှာ ဒါကို အငယ်လေးထဲကကြားနေကျ ကျနော်တို့အရပ်ဖက်မှာ ဟာသစကားတစ်ခုကို ထည့်ရေးလိုက်တာပါ။ ခါတနာ လုပ်တယ်.. စူနိုက်လုပ်တယ်ဆိုတာတွေလည်း မသိဘူး အမှန်တော့ ခုရက်ပိုင်း နေသိပ်မကောင်းတော့ အမေ့ကိုသတိရတယ် ပြီးတော့ ကြင်နာတတ်တဲ့ ဆွေမျိုးတွေကို သတိရတယ် ဒါကြောင့် ဒီစာကိုရေးဖြစ်တယ် ခုတော့ ဒီင်္လိုတွေဖြစ်ပြီး နည်းတောင်နည်းသေးတယ် ဟဟား လူတွေက နေမကောင်းဖြစ် စိတ်မကြည်ရင် လေသံကမာတတ်တယ်ဆိုသလားလို့ လေသံမာသွားရင် ဆောတီးပါ ဘာသာရေးအကြောင်းဆွေးနွေဖို့ကျနော့်မှာ ဗဟုသုတမစုံဘူးရယ် ။း) ကျနော့် အဲ့စာကြောင်းလေးရေးမိလို့ ငရဲအိုးထဲ ဇောက်ထိုးမကျဘူးလို့ထင်တာပဲ :P
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆို ဆင်ခြင်ရတာပေါ့ ကျေးဇူးပါ ။
အော် မောင်မျိုးက မျက်နှာကြီးမျိုးဘဲကိုးး)
ကျွဲပိုင်ကြီးဆိုတော့ ရွာမှာ အတော်မျက်နှာပွင့်မဲ့သူ
ရွာအကြောင်းလေးတွေဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားစရာ ပျော်စရာ..
ကြောင်ဖစ်လိုက်.. ကျွဲဖစ်လိုက်.. ဒီတိရစ္ဆာန်ထဲကကို မထွက်တော့ဘူး.... လုမြောင်ရာ... :P.. မင်းက ကရင်စပ်တယ်လား.. ငါနဲ့တူတူပေါ့...း)
မောင်မျိုးတို့ က တစ်ကယ် ဆွေမျိုးတောင့်တာပဲဗျ ကျွန်တော်က မွန်တော့ သိပ်မမြင်ဖူးဘူး။ ဒါပေမဲ့ မောင်မျိုးမျက်နှာကတော့ ဗမာ သိပ်မစစ်မှန်းထင်မိပါတယ်။ အဖေကို အဘ လို့ ခေါ်တာလားဗျ။ ကျွန်တော်တို့ တော့ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ အမေရဲ့ အဖေ(အဘိုး) တစ်ဦးတည်းကို အဘ လို့ ခေါ်မိနေတယ်လေ။ အဘိုးကလည်း သူ့ ကိုယ်သူ အဘ လို့ ပြောရတာ ပိုအာတွေ့ တယ်ထင်ပ။ ဒါ့ထက် မောင်မျိုး ဆယ်တန်းတုန်းက စာစီစာကုံးတွေ ပထမချည်း ရမှာပဲနော်။ ထင်သာ မြင်သာအောင် ရေးတတ်လို့ ပါ။ I like your Post!,,,, :)
သိပြီ...၊ ဒါ့ကြောင့် မောင်မျိုးစကားပြောရင် (စာရေးရင်) အဆုံးသတ်က “ပြီ” လို့ ရေးရမယ့်အစား “ပြီး” လို့ ဖြစ်, ဖြစ်သွားတာကိုး...၊း) ကျနော်လည်း ကရင်ရွာမှာ နေခဲ့တော့ အဲဒီလို အသုံးတွေ သတိထားမိတယ်၊
ဆွေမျိုးတွေချည်းပဲ လူခွဲ၊ ဘောလုံးအသင်းတွေ ထောင်ပြီး MNL လိုမျိုး ကျွဲဖလား league လုပ်လို့တောင် ရတယ်၊ :D
ကျွဲသူဌေးလေဆို တော်ပြီပေါ့။ ကျွဲငမျိုးတော့ မလုပ်ပါနဲ့ ဗျာ။ မကောင်းပါဘူး...
ကျွဲသူဌေးလေး မောင်မျိုး ...
မရဲဘဲ ကျွဲမစီးနဲ့နော်။ တော်ကြာ ကျွဲနှစ်ကောင် ခတ်တဲ့ကြား မြေဇာပင် ဖြစ်အုံးမယ်။ ကျွဲကူးရေပါ ဖြစ်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပဲပေါ့ ... ။
အဟဲ ကျွဲသူဌေးလေးအတွက် ကျွဲပါတဲ့စကားပုံ သိသလောက်ရေးလိုက်တယ်။ :))
မချော.... ဟုတ်တယ် အစ်မရေ အရင်တုန်းက တော့ ရွာမှာ ကျနော်တို့က အဆင်ပြေတော့ မျက်နှာပွင့်တာပေါ့ ခုတော့ မျက်နှာပိတ်ကုန်ပြီး ဟဟား ရွာအကြောင်းလေးတွေ နောက်ကြုံရင် ထပ်ရေးအုံးမယ်း)
အနော်နိမတ်..... ရှိတော့ရှိတယ် ပြဘူး ။
နေ၀သန်...မင်းပြောမှ သတိထားမိတယ် ဟုတ်ပါ့ ငါကလည်းနော်း) မင်းမျက်နှာက ကရင်လိုလို တရုတ်လိုလိုနဲ့ တစ်ခုခုတော့စပ်မယ်လို့ထင်သား ။
လဒ.....အာကိုက အလုပ်များတယ်လေကွယ် နင့်ဖုန်းက အစုတ်ကြီးမို့ဖြစ်မယ် ။
ကိုညီ...ဟုတ်လား ဘေးလူတွေက သတိထားမိတယ်နော့် ကျနော့်ကိုယ်ကျနော်တော့ ဟုတ်နေပြီထင်တာ ဟဟား ကျနော်တို့အမျိုးတွေက မိန်းခလေးတွေများတော့ ကန်လို့မရဘူုးအစ်ကိုရး)
အဖြူရောင်.....ပီ ကြည့်တော့ ဒီ သွားတာ ကျနော်လည်း ဘာမှန်းမသိတော့ ဂူသွားတယ် ဟီး
ဘလက်ကော်ဖီ...သောက်ချင်တယ် အယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ ကျွဲတော့မလုပ်ဘူး သူဌေးပဲလုပ်တော့မယ်ဗျ ။
မမေ...အစ်မကတော့ စာတွေအများကြီးဖတ်တော့ စကားပုံတွေ အများကြီးသိတယ်နော့် အစ်မပြောခဲ့တဲ့ စကားပုံ ကျနော်သိပ်မကြားဖူးသေးဘူးး တကယ် ။